Laftagareen oo dhabar jabinaya beelaha Dir iyo Raxanweyn | KEYDMEDIA ENGLISH
Laftagareen oo dhabar jabinaya beelaha Dir iyo Raxanweyn
Qorshe uu hindisay Boqor Buurmadow, oo ay la qaateen, inta badan siyaasiyiinta iyo odayaasha ka soo jeeda beelaha Dir iyo Raxanweyn, ayaa burbur ku dhow, kadib markii uu ballantii hore ka baxay Madaxwenaha Koofur galbeed.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida aan ka soo xigannay ilo loo qaateen ah, waxaa qarka u saaran inuu burburo, is gaashaan-buureysi, sanadkii la soo dhaafay ay wadeen siyaasiyiin iyo odawaal dhaqan oo ka soo kala jeeda beelaha Digil iyo Mirifle iyo Dir.
Billowgii sanadkii hore, waxaa bannaanka u soo baxay isbahaysi ka dhexeeya labadan beelood, kaas oo ay ku doonayaan in ay sanandkaan wax kaga baddellaan, awood qeybsiga muddada soo taagnaa ee ku aaddan saddexda kursi ee ugu sarreeya dalka.
Qorshahaan, oo ay gadaal ka riixayeen odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin, ay ku jiraan Boqor Buurmadow, Mahdi Guuleed iyo Cabdicasiis Laftagareen, ayay hadda ku dhex rafatay Madaxtooyada Soomaaliya, taas oo sababi karta inuu fashilmo qorshihii hore.
U-jeekdu, wuxuu ahaa, in mid ka mid ah labadaan beelood la saaro kursiga ugu sarreeya dalka, iyadoo la mideynayo cododka labada dhinac, beesha kalena, qaadato kursiga Ra’iisul Wasaaraha, taas oo ah isku day aan wali hore u dhicin haddana fashil ku dhow.
Waxaa jiray kulan ka dhici lahaa, magaalada Baydhabo, oo lagu saxiixi lahaa mucaahadada rasmiga ah, hayeeshee, xogo hoose, ayaa sheegaya, in qaar ka mid ah, xildhibaannada Dir, ka soo hor jeesteen ka qeyb galka kulankaas, maadaama la beddalay ajandihii hore.
Cabdicasiis Laftagareen iyo Mahad Guuleed, ayaa la sheegayaa in ay kulanka Baydhabo, ka dhigeen olole Farmaajo, taas oo meesha ka saartay qorshihii hore iyo in uu billowdo guux hoose, oo inta badan xildhibaannadu ku diiddan yihiin ka qeyb galka kulankaas.
Shakiga la xariira, burburka isbahaysiga labadan beelood, ayaa sii xoogeystay isbuucii hore, kadib markii, la ogaaday in Farmaajo iyo Fahad Yasiin, billowga bisha Ramadaan u socdaali doonaan magaalada Baydhabo, si ay u xirtaan kuraasta KGS oo hadaba u xiran.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen, howl-wadeenno, ka tirsan xaafiiska RW ku-xigeynka dalka, waxaa hadda xoogeystay, warar kale, oo sheegaya in kulanka loo soo wareejiyo caasimadda, ama ka hor midka Baydhabo, Muqdisho looga heshiiyo ajandaha guud.
20-kii sano ee la soo dhaafay, beelaha Hawiye iyo Daarood, ayaa ku fadhiyay labada kursi ee ugu sarreeya dalka, [Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha] halka Raxanweyn, heystay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Dir ayaa iyana heysta Guddoomiyaha Aqalka sare.
Sida ay KON, ogaatay, Farmaajo, ayaa si weyn ula dhacsanaa, markii la sameynayay isbahaysigaan, isagoo doonayay in musharrax ka tirsan Midowga Musharixiinta, uusan helin kursiga, hayeeshee, kala qeybsanaantooda, ayuu hadda rajeynaya inuu ka faa’iideysto.